ChaCha + iPhone: Fanairana, Jeografia, valiny, fizarana | Martech Zone
Alatsinainy Aprily 25, 2011 Sabotsy, Oktobra 29, 2011 Douglas Karr
Vao avy nisintona aho ary afaka nilalao niaraka tamin'ny fampiharana an'i ChaCha izay nohavaozina tamin'ny iPhone. Mahagaga ahy… tsotra ny fampiasana ary matanjaka ny fiasa. Ny fampiharana ChaCha iPhone tany am-boalohany dia nampiasaina mba hanosehana fotsiny ny valiny avy amin'ny tahiry amin'ny alàlan'ny fampiharana iPhone hiverina any amin'ilay mpampiasa. Ity fampiharana ity dia ny fiakarana - ary misy tsy ampoizina vitsivitsy.
Tahaka ny amin'ny ChaCha tranonkala, misy fanontaniana tsy voavaly dia atosika mankany amin'ny dobo fitarihana a valiny mivantana.
ChaCha dia nitahiry foana jeografia miaraka amin'ireo fanontaniany fa tsy nampiasa an'io data io mihitsy. Miaraka amin'ny tahiry iray manosika valiny an-tapitrisany isan'andro, dia loharanom-pahalalana volamena tokoa izany. Araka ny nambaran'i Scott tao amin'ny lahatsariny momba ny fampiharana - mampiankin-doha tokoa ny mahita ny fanontaniana apetraky ny hafa manodidina anao.
Azonao izao manampy fanairana! Nahazo lohahevitra mahaliana? Ento mankany aminao ny valiny. Azoko antoka fa hanana izany ny zanako vavy Fanontaniana Justin Bieber apetraka amin'ny fotoana fohy.
Mizara fanontaniana azo atao izao amin'ny alàlan'ny mailaka, SMS ary Facebook!
Fanontaniana mifandraika mora jerena!
Mahafinaritra ny mahita ny ekipan'i Scott mivoaka mitarika miaraka amina hevitra vaovao - ary tena nofintininy amina fampiharana fohy. Koa satria Google Panda debacle, ity dingana ity dia mampitombo ny fifampiraharahana amin'ireo mpankafy ChaCha masiaka. Raha ny fijeriko ny marketing dia tiako fa sady mamporisika ny fizahana bebe kokoa (miaraka amin'ny Endri-javatra akaikin'ny Me) ary koa manangana amina endrika fikolokoloana ahafahan'ny mpampiasa miverina (miaraka amin'ny fanairana).
Arahabaina ry ekipa ChaCha! Tadiavo ary ampidino ny app ChaCha iPhone vaovao amin'ny iPhone-nao. Manantena aho fa misy kinova iPad ho avy - mahafinaritra be ity!